[Review] TOP 6 Kem chống nắng La Roche Posay nào tốt nhất 2022 | Muasalebang - Muasalebang
[Review] TOP 6 Kem chống nắng La Roche Posay nào tốt nhất 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] TOP 6 Kem chống nắng La Roche Posay nào tốt nhất 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Ukuvikela ilanga Kungumkhiqizo wokunakekelwa kwesikhumba obalulekile wawo wonke umuntu, ikakhulukazi lapho kushisa. I-sunscreen kulula kakhulu ukuyisebenzisa, kepha uma ukhetha uhlobo olungalungile lwe-sunscreen, izobangela kalula izinkinga eziningi zesikhumba ezifana nokungezwani komzimba, izinduna …
I-La Roche Posay iwuphawu lwezimonyo olunezinhlobonhlobo eziningi zokuvikela ilanga ezifanele zonke izinhlobo zesikhumba, kuhlanganisa nesikhumba esizwela kakhulu. Isihloko esilandelayo sizokusiza ufunde okwengeziwe I-sunscreen yaseLa Roche Posay okungcono kakhulu manje!
1 Mayelana ne-brand La Roche Posay
2 Ingabe i-La Roche Posay sunscreen ilungile?
3 Zingaki izinhlobo zokuvikela ilanga i-La Roche Posay enazo?
3.1 Ubuchwepheshe obunamandla bokuvikela ilanga i-Mexoplex®
3.2 Ubuchwepheshe be-AirLicium™ obumunca uwoyela
4 Izikhilimu zelanga ezi-6 ezihamba phambili ze-La Roche Posay namuhla
4.1 1. I-La Roche Posay Anthelios XL Isikrini selanga SPF 50+ Fluid ULTRA-LIGHT
4.2 2. I-La Roche Posay Anthelios XL Anti-imperfections Sunscreen
4.3 3. La Roche Posay Anthelios Pocket Sunscreen SPF 50+
4.4 4. La Roche Posay Anthelios XL Isikrini selanga SPF 50+ Tinted Dry touch gel-cream
4.5 5. I-Sunscreen La Roche Posay Uvidea XL BB Cream SPF50+ PA++++
4.6 6. I-La Roche Posay Anthelios Invisible Mist Sunscreen SPF 50
Mayelana ne-brand La Roche Posay
I-La Roche Posay ingenye yemikhiqizo yezimonyo edumile yaseFrance, eyingxenye yeqembu lehlelo i-L’Oréal. I-La Roche Posay isikhona emazweni amaningi, ingumugqa womkhiqizo onconywa njalo ngodokotela besikhumba nodokotela.
Ngo-2007, iLa Roche-Posay yethulwa ngokusemthethweni eVietnam futhi yathola ukunakwa kwabantu abaningi. Imikhiqizo ekhethekile I-sunscreen yaseLa Roche Posay ingenye yemikhiqizo eyintandokazi eVietnam.
Imikhiqizo kaLa Roche Posay yokuvikela ilanga ihlukene futhi ihloselwe amakhasimende amaningi ahlukene. Imigqa yomkhiqizo ukuvikela ilanga Imikhiqizo yomkhiqizo ayinayo kuphela umphumela wokuvikela esikhumbeni, kodwa futhi ngokuphumelelayo ekunakekelweni kwesikhumba ngezakhi kanye nokulandela izinhlayiya ezivela emanzini amaminerali entaba-mlilo ngokuvumelana nefomula ekhethekile yeLa Roche Posay.
Ingabe i-La Roche Posay sunscreen ilungile?
I-La Roche Posay Sunscreen umkhiqizo owaziswa kakhulu ngekhwalithi nokusebenza kwawo, njalo uhlose ubumnene nokuphepha kwesikhumba, ofanele zonke izinhlobo zesikhumba futhi awubangeli ukucasuka. Ngaphezu kokuvikela isikhumba emisebeni eyingozi ye-UVA ne-UVB, futhi inokumelana namanzi ngokuphelele.
Zingaki izinhlobo zokuvikela ilanga i-La Roche Posay enazo?
I-La Roche Posay sunscreen ihlukaniswe yaba izinhlobo ezimbili: i-sunscreen ngokomzimba kanye nemithi yokuvikela ilanga enezithako ezinobuchwepheshe obukhethekile obu-2 bokuvikela ilanga.
Ubuchwepheshe obunamandla bokuvikela ilanga i-Mexoplex®
Eyokuqala ubuchwepheshe be-Mexoplex®. I-Mexoplex® igama lenhlanganisela ye-Tinosorb S, Mexoryl SX/XL kanye ne-Eldew ® SL-205. Lobu buchwepheshe bunikezwe ilungelo lobunikazi ngabakwa-L’Oreal ngo-2011.
I-Eldew ® SL-205 (Isopropyl Lauroyl Sarcosinate) yengezwe kufomula ukusiza ukuzinzisa izihlungi zamakhemikhali e-UV, izithako ezisebenzayo. Eqinisweni, kubuchwepheshe be-Mexoplex®, kunezithako ezi-3 ezisebenzayo: i-Tinosorb S, i-Mexoryl SX/XL eqinisiwe i-Avobenzone (into ebhekwa njenge-anti-UVA engcono kakhulu kanye nemikhiqizo ye-La Roche-Posay nayo iyasetshenziswa). Uma wengeza i-Eldew ® SL-205 isihlungi se-UV siba isikhathi eside futhi sibe namandla.
I-Mexoplex® inyusa ukuzinza kwe-Avobenzone kufika izikhathi ezingu-~3.3, iphinda kabili ukuvikelwa kukho kokubili i-UVA ne-UVB. Ngaso leso sikhathi, inkomba ye-PPD nayo inyuke izikhathi ezi-2 (idlula indinganiso eyisibopho ye-UVA ye-European UVA) kodwa inani lamakhemikhali okuhlunga ama-UV adingekayo lancipha ngo-15%.
I-Mexoryl SX/XL izizinzisi ezimbili, ezinokuvikela okuhle kwe-UVA kuwo wonke amaza wamaza, ngaphandle kuka-380nm – 400nm. Ngakho-ke, i-La Roche-Posay yengeze i-Tinosorb S. Lesi sithako esisebenzayo sisebenza kahle ngaphezu kwe-spectrum ebanzi futhi sibuthakathaka kuphela kumaza wamaza angu-380nm – 400nm.
Ubuchwepheshe be-AirLicium™ obumunca uwoyela
Okulandelayo ubuchwepheshe be-AirLicium™ obumunca uwoyela. Lena into elula kakhulu enegesi engu-99% kanye ne-silicon engu-1%. I-AirLicium™ isesimweni se-micro futhi inamandla okumunca nokulawula uwoyela esikhumbeni
Le nto ingamunca kuze kube izikhathi ezi-4 kunesisindo sefomula. I-molecule engu-1 ye-AirLicium™ izomunca izikhathi ezifika kwezingu-150 zevolumu yayo kuzinto zokuthambisa. Iphinde imelane kakhulu namanzi kanye nomjuluko.
Ngamafuphi, i-AirLicium™ isiza ukunciphisa ukukhanya, ukulawula i-sebum, ukuvuselela isikhumba nokudala imiphumela ehlala isikhathi eside.
Izikhilimu zelanga ezi-6 ezihamba phambili ze-La Roche Posay namuhla
Nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, ukusetshenziswa kwe-sunscreen kubalulekile. Ukusebenzisa njalo kuzokusiza ukuthi uvikele isikhumba sakho ezintweni eziyingozi zemvelo, imisebe ye-UV, njll. Uma usadidekile ekukhetheni i-sunscreen ephephile, inkomba yokuvikela elangeni esebenzayo, ake sithole izinhlobo ezingu-6 eziphezulu sindawonye. I-La Roche Posay Sunscreen okuhle ngezansi:
1. I-La Roche Posay Anthelios XL Isikrini selanga SPF 50+ Fluid ULTRA-LIGHT
Uhlobo lwesikhumba olufanele
I-La Roche Posay Anthelios XL Fluid Ultra-Light iwumugqa wamakhilimu okuvikela ilanga afanele izinhlobo eziningi zesikhumba, kusukela kwejwayelekile kuya esikhunjeni esomile, kuya esikhumbeni esizwelayo. Lo mugqa wokuvikela ilanga usebenzisa isihlungi senkampani esikhethekile se-Mexoplex ukuze unikeze ukuvikeleka kwelanga okuphelele futhi uvimbele imisebe ye-UVB ne-UVB.
Isihlungi se-Mexoplex: Sivikela isikhumba emisebeni ye-UV eyingozi.
I-Butyl Methoxydibenzoylmethane aka Avobenzone kanye ne-Octocrylene: Ilawula uwoyela oweqile esikhumbeni.
I-silica isiza ukulawula uwoyela kanye ne-glycerin isiza ukuthambisa
Ukuvikelwa kwelanga okuphezulu, ukuvikela isikhumba esihle kakhulu
Ukuthungwa kuncane, kubushelelezi futhi kulula kakhulu
Ivikela amanzi ngempumelelo
Idizayini ehlakaniphile, ehlanzekile kanye nokulungiswa kahle komthamo
Isithako siqukethe utshwala obomile, labo abanesikhumba esomile noma abangezwani notshwala kufanele baqaphele
Isiphetho siyacwebezela impela
Kufanele ugcobe ukhilimu imizuzu eyi-15 ukuya kwengama-20 ngaphambi kokuphuma
Ifanele zonke izinhlobo zesikhumba, kodwa isikhumba esinamafutha kufanele sisebenzise impushana eyengeziwe, isikhumba esomile kufanele simanzise ngaphambili.
2. I-La Roche Posay Anthelios XL Anti-imperfections Sunscreen
I-Anthelios Anti Imperfections sunscreen ifanele labo abanesikhumba esinamafutha, isikhumba esinezinduna, isikhumba esivame ukuvela izinduna noma amabala amnyama ngemva kwezinduna ezibangelwa ilanga.
Isithako esisebenzayo i-Airlicium: inciphisa ukugcwala kwe-sebum esikhumbeni, inciphise ukukhanya esikhumbeni.
Isithako esisebenzayo i-Salicylic Acid ehlanganiswe nesithako se-Niacinamide: inomphumela ovelele ekwehliseni amabala ezinduna abomvu, avuvukele, isiza izimbotshana ukuthi zivuleke kakhulu.
Umkhiqizo une-SPF 50+ ephezulu yokuvikela ilanga, awunaphunga futhi awuna paraben.
Izihlungi eziningi ze-UV zine-spectrum ebanzi ekwazi ukuvikela isikhumba kuyo yomibili imisebe ye-UVA, imisebe ye-infrared kanye nokungcoliswa kwemvelo.
Umkhiqizo uqukethe amanzi amaminerali e-La Roche Posay. Isiza ukupholisa isikhumba ngokushesha, i-anti-oxidant esebenzayo.
Uma ifakwe esikhumbeni, kulula ukusabalala, futhi ibuye imunce ngokushesha. Ayishiyi insalela enamathelayo esikhumbeni.
Umkhiqizo awunaphunga futhi awunaparaben. Ihlala isikhathi eside uma isetshenziswa ngaphansi kwamanzi.
Umkhiqizo woma ngokushesha.
Lapho isetshenziswa okokuqala, izwakala inamafutha futhi ithatha isikhathi eside ukumunca.
3. La Roche Posay Anthelios Pocket Sunscreen SPF 50+
Ifanele isikhumba esomile, esivamile futhi esibucayi. Ifaneleka ngokukhethekile isikhumba esizwela ilanga.
I-XL Protect: Ihlanganisa izihlungi eziningi ze-UV ezinobubanzi obubanzi ukusiza ukuvikela isikhumba ngisho nasemisebeni emide ye-UVA nokusiza ngama-anti-oxidant, ukuvikela okuphelele kwesikhumba emiphumeleni yezindawo ezingcolile njengentuthu, uthuli, ukungcoliswa komoya, njll. umoya ongcolile. …
I-Glycerin: Inciphisa inqubo yokuguga, inikeza umswakama, ihlanza isikhumba. I-Glycerin i-benign kakhulu, ifaneleka kuzo zonke izinhlobo zesikhumba, ngakho-ke akukho ukwesaba ukucasuka ngesikhathi sokusetshenziswa.
I-Thermal Spring Water: Amanzi amaminerali adumile avela e-La Roche Posay anamandla okuthambisa, amanzi kanye ne-antioxidant, avikele isikhumba kuma-radicals mahhala avela emisebeni ye-UVA – UVB.
Ifanele izingane kanye nabantu abadala, ingasetshenziswa ebusweni nasemzimbeni.
Idizayini eqinile, elungele ukuthwala lapho uhamba.
Imunca ngokushesha, ayibangeli umuzwa wokunamathela ongajabulisi.
Inkomba ephezulu yokuvikela ilanga.
Ngaphezu kokuvikelwa kwelanga okuhle, umkhiqizo ubuye ube nomphumela omuhle wokupholisa kanye ne-anti-oxidant.
Iqukethe i-alcohol denat, ayilungile uma isikhumba sizwela kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 340,000 VND
4. La Roche Posay Anthelios XL Isikrini selanga SPF 50+ Tinted Dry touch gel-cream
I-sunscreen yalabo abanesikhumba esinamafutha, esibucayi futhi esicasula kalula elangeni.
Amanzi amaminerali e-La Roche Posay: isithako esiza ukukhipha amanzi, ukuthambisa, nokupholisa isikhumba ngaphansi kwelanga ngempumelelo, ukunciphisa ukucasuka kwesikhumba esibucayi.
Isihlungi se-Mexoplex: sihlanganiswe kusuka ezintweni ezi-3: i-Mexoryl Sx, i-Mexoryl XL, i-Tinosorb S ukusiza ukuhlinzeka ngokuvikelwa kwelanga okuphezulu nokuzinzile nokudala ifilimu evikelayo esikhumbeni ngaphansi kwemiphumela eyingozi yelanga.
I-Octocrylene, i-Nano-particle Titanium Dioxide: i-sunscreen, enciphisa umthelela wemisebe ye-UVA ne-UVB esikhumbeni kanye nale titanium dioxide engusayizi we-nano isiza ukunqoba ububi bokushiya imicu emhlophe esikhumbeni njengezinye izinhlobo.
I-silica: iyasebenza ekulawuleni amafutha esikhumbeni
I-SPF 50+ inikeza isivikelo elangeni esisebenzayo nesihlala isikhathi eside
Imunca ngokushesha, izacile, ayinamafutha
Ukumelana kahle namanzi
Idizayini ehlakaniphile, ehlangene
Ukhilimu woma ngokushesha kakhulu, ngakho-ke uma ungasakazi ngesikhathi, uzoshiya umugqa omhlophe.
Intengo yesithenjwa: 340,000 – 495,000 VND
5. I-Sunscreen La Roche Posay Uvidea XL BB Cream SPF50+ PA++++
Kuyinhlanganisela ye-sunscreen elungele izinhlobo eziningi zesikhumba.
I-Titanium Dioxide inomphumela wokuvikela ilanga
Izithako zokunakekelwa kwesikhumba ezingaphezu kwezinhlobo ezi-4: i-carmosine ehlanganiswe namanzi amaminerali e-La Roche Posay ukusiza ukuvikela isikhumba ekungcoleni, ama-radicals mahhala; Ibhotela le-Shea ngekhono layo lokuhlinzeka ngomswakama omuhle.
Iqukethe izinhlayiya zombala ezenziwe ngodaka lwamaminerali emvelo, ngakho-ke ayilungile ngokwedlulele, iphephile, ayicasuli ngokuphelele esikhumbeni, ngisho nesikhumba esibucayi kakhulu.
Idizayini ehlakaniphile, ithiphu elincane likakhilimu lisiza ukwenza ukhilimu uhlanzeke futhi ulungise inani likakhilimu ngendlela othanda ngayo
Izithako ezinhle zokuvikela ilanga, ikhono lokuvikela eliphezulu.
Isikhumba emva kokufakwa komile
Ayinaphunga, i-paraben-free, i-non-comedogenic, i-hypoallergenic.
Umbala ofanele isikhumba sase-Asia
Ihlolwe esikhumbeni esibucayi sase-Asia ngaphansi kokuqondisa kukadokotela wesikhumba.
Ikhono lokufihla alikho phezulu
Isikhumba sizwakala simanzi kancane.
Intengo yomkhiqizo iphezulu impela.
Intengo yesithenjwa: 525,000 VND
6. I-La Roche Posay Anthelios Invisible Mist Sunscreen SPF 50
Lesi sifutho sokuvikela ilanga senzelwe ngokukhethekile isikhumba esizwelayo nesicasuka kalula elangeni.
I-Homosalate: Ivikela isikhumba emisebeni ye-UVB
I-Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Drometrizole Trisiloxane: Ivikela isikhumba emisebeni eyingozi ye-UVA ne-UVB elangeni.
I-Glycerin, i-Caprylyl Glycol, Uju, i-Propylene Glycol: Ihlinzeka futhi igcine umswakama wesikhumba Ukubuyekezwa kwe-La Roche-Posay Anthelios Anti-Shine Invisible Fresh Mist SPF50 isifutho sokuvikela ilanga – BlogAnChoi
I-Silica silylate, i-Poly C10-30 i-Alkyl Acrylate: Ilawula ukukhishwa kukawoyela nokuphuma kwe-sebum esikhumbeni.
I-AIRLICIUM: Isithako esisebenzayo esiza ukwehlisa uwoyela oweqile, umjuluko kanye ne-sebum.
I-Dimethicone (Uhlobo lweSilicone): Isiza isikhumba sibe bushelelezi.
Ngomklamo wesifutho, inkungu enhle. Imunca ngokushesha esikhumbeni ngaphandle kokushiya amaconsi esikhumbeni.
Sebenzisa izikhathi eziningi ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi izimonyo zizowashwa, usize izendlalelo zezimonyo ukuthi zihlale ziqinile.
I-spray design elula yonga isikhathi.
Intengo iphezulu impela uma iqhathaniswa nezinye imigqa yokuvikela ilanga emakethe
Intengo yesithenjwa: 400 000VND
Nazi eziphezulu ezingu-6 I-sunscreen yaseLa Roche Posay esetshenziswa kakhulu namuhla. Ngethemba ukuthi abafundi bazozitholela i-sunscreen efanelekile kakhulu ukuze bakwazi ukuvikela isikhumba sabo kahle. Ukufisa njalo umuhle.
Top các loại sữa hạt cho bé tăng cân tốt nhất trên thị trường | Muasalebang
6 cách kết nối máy tính, laptop với máy chiếu đơn giản | Muasalebang